यसकारण एसडी मुनी, नेपाल-भारतबीचमा अस्थिरता चाहन्छन् ... - Everest Dainik - News from Nepal
यसकारण एसडी मुनी, नेपाल-भारतबीचमा अस्थिरता चाहन्छन् …
काठमाडौं, चैत २७ । दिल्लीमा आफूलाई नागरिक अभिनन्दनका लागि आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गर्दा भनेका थिए कि यहाँका नेता र बुद्धिजीवीमा दुईवटा भ्रम रहेछन्ः एक कम्युनिष्ट सरकारका कारण लोकतन्त्र संकटमा पर्छ कि ? अनि नेपाल चीनतिर ढल्कन्छ कि ?
भारतीय पत्रिका द क्विन्ट डटकम को विचार पेजमा एसडी मुनीको लेख छापिएको छ । सो लेखमा उनले पुरानै ‘बडेभाइ’ चरित्र प्रदर्शन गर्दै भनेका छन्- ‘ओलीलाई थाहा छ कि चिनियाँ कार्ड खाली देखाउने दाँत मात्रै हो, त्यसको आर्थिक प्रयोजन छैन । उनलाई थाहा छ कि भारतको सहयोगविना नेपाली जनतालाई गरेको विकासको वाचा पूरा गर्न सकिँदैन । भारतलाई धेरै चिढ्याइयो भने माओवादीसँगको गठबन्धनमा पनि समस्या आउने कुराको आँकलन उनले गरेका छन् ।’
सार्कका विषयलाई एसडीमुनीले सिधै पाकिस्तानको एजेण्डा भएको बताएका छन् । उनले लेखमा अगाडि भनेका छन्- ‘ओलीले भनेको हरेक कुरामा हो मा हो मिलाएको भारतले सानो स्वरमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । नेपालले पाकिस्तान र चीनसँगको सम्बन्ध चाहिनेभन्दा बढी न्यानो बनाएमा दिल्लीलाई चित्त बुझ्ने छैन । भारत सार्कको विकल्पमा बिमिस्टेकलाई अघि सार्न चाहन्छ र नेपालले पाकिस्तानको सार्क एजेण्डा नबोकोस् भन्ने पनि चाहन्छ ।’
आफूलाई नेपाल मामिलाका जानकार दाबी गर्ने प्रोफेसर मुनी अगाडि लेख्छन्- ‘चीनसित नेपाल चाहिनेभन्दा नजिक भयो भने भारतले आफ्नो उपायहरू प्रयोग गर्ने छ । जस्तै- चीनले बनाएको जलविद्युत परियोजनाबाट भारतले बिजुली किन्ने छैन र मधेसको मामिला भारतले अहिले प्राथमिकता नदिएको हो, पछि फेरि उठाउन सक्छ ।’
आफ्नो लेखमा उनले भनेका छन्- ‘ओलीको भ्रमण र नेपाल-भारत सम्वाद कत्तिको सफल भयो भन्ने कुराको मापन दुवै पक्षले आफ्ना वाचाहरूको कत्तिको पालना गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ । ओलीका लागि आफ्नाो दुई प्रमुख राजनैतिक हतियार, राष्ट्रियता र चिनियाँ कार्डको प्रयोग गरेर भारतबाट फाइदा लिन सजिलो हुने छैन । तर, नेपालमा राजनैतिक र सामरिक वृत्तमा ठूलो लगानी गरिसकेको चीनले ओलीलाई त्यसै छाड्ने छैन । भारतले पनि आˆना आधारभूत सुरक्षा चासोहरूमा सम्झौता गर्ने छैन ।’
मोदी र ओलीले जे गरे, त्यो केही सोचविचार नगरेर हठातको निर्णयमा गरेका थिए । तर, कोठामा एउटा अदृश्य हात्ती पनि थियो- चीन ।
तर, नेपाल र भारतकावीच रही आएको भूगोल, सभ्यता र सामाजिक सम्बन्धहरूका कारण दुई देशवीच रहेको असमझदारी धेरै समय टिक्न सकेन । ओलीले चुनाव जितेपछि भारत ड्यामेज कन्ट्रोलमा लाग्यो । मोदीले फोन गरेर ओलीलाई बधाइ दिए र सुष्मा स्वराजलाई पठाएर सबै कटूता त्याग्न आग्रह गरे । ओलीले पनि सकारात्मक सन्देश दिए र परम्पराअनुसार भारतलाई नै आˆनो विदेश भ्रमणको पहिलो गन्तव्यका रुपमा रोजे ।
अबका आगामी दिनहरू हेरेर थाहा हुनेछ कि तीन देशवीचको सम्बन्धले कस्तो दिशा लिनेछ । -अनलाइनखबरबाट